PressReader - Isolezwe: 2017-11-15 - Sekudlisa isitayela se-make up ye-matte
Sekudlisa isitayela se-make up ye-matte
SINGENISILE isitayela se-make up ye-matte, okuwuhlobo olunemibala egqamile kodwa engacwebezeli. Lolu hlobo lusebenza kusukela kwifoundation kodwa lumandla kakhulu ezindebeni lapho kusetshenziswa amalipstick omile.
UNkk Futhi Mkhize oyimake up artist nomnikazi weBeauty Academy eThekwini, uchaza kabanzi ngokusetshenziswa kwalolu hlobo lwe-make up. Yize ethi lungasetshenziswa yinoma ngubani, kubalulekile ukuthi abantu bazi imibala ebafanelayo.
Uthe inhloso ye-matte ukugqamisa kakhulu i-make up kuzo zonke izingxenye zobuso. I-matte ayingenisile ebusweni kuphela kodwa nasezinzipheni ezifakelwayo, azisapholishwa ukuze zingacwebezeli.
“Kuqala ekufakweni kwefoundation nayo okumele ihambisane nesitayela se-matte. Indlela oyifaka ngayo kumele ihluke kune-make up ejwayelekile. I-foundation uyifaka nge-brush noma ngesiponji umbambathe, ukuze igqame, imboze lonke ibala lakho. Lokhu kuyasiza nakwabashadayo ngoba i-matte iyabambelela, ihlale isikhathi eside ingadingi ukuvuselelwa.”
Emehlweni uthe kusetshenziswa i-mascara nepeni, kugqanyiswe kakhulu. Mayelana nemibala ye-matte uthe yize ungekho umthetho oqondile wokuziphaqula, kumele imibala ihambisane. “Ngeke usebenzise umbala oluhlaza emehlweni bese usebenzisa i-lip stick ephinki. Kumele uwazi umbala ohambisana nebala yakho njengoba wenza uma ukhetha ifoundation. Ngiyazi abantu bayayithanda imibala egqamile kodwa akusho ukuthi uma ufanela umngani wakho nawe uzokufanela.”
Uyakuhlaba ukusebenzisa i-lipstick ye-matte emnyama, athe ayisebenzi noma yinini.
Uthe isikhathi esiningi isetshenziswa ngabamodelayo uma bekhangisa ngezingubo noma ngabaculi esiteji.
Uveze nokuthi kubalulekile ukuthenga i-lipstick ye-matte esezingeni elikahle, ukuvikela izindebe zakho. Uthe akudingeki yome kakhulu ngoba izindebe zingaqhekeka. Okuhle ngelipstick ye-matte ukuthi iyahlala ezindebeni.
UNkk Mkhize uncoma eyombala o-nude, athe ibukeka kahle ku-matte. Okubalulekile ukuthi noma ngabe iwumbala onjani kodwa kudingeka uyizungeze ngepeni lakhona ukuqoqa izindebe. Lokhu kwenzelwa ngoba vele lolu hlobo lwe-lipstick lwenza izindebe zibukeke zinkulu.
Mayelana nezinye izitayela ze-make up, uNkk Mkhize uthe ziphumile esitayeleni izinkophe zokufakelwa. Ngokwakhe ubevele engazikhuthazi ngoba ziqothula ezemvelo. Uncoma i-mascara athe iyazikhulisa izinkophe, igwema nokugoqana. Uthe ukudweba amashiya abe makhulu nakho kuhambisana nesitayela se-matte.
UKUGQAMISA amashiya nezindebe kuhambisana nesitayela esisha seMake Up esibizwa nge-matte, engenisile kule sizini